Nzira yekugadzira yakagadzirirwa polymer ivhu | Mhizha On
Nzira yekugadzira yakagadzirirwa polymer ivhu
Irene Gil | | Crafts uye zvinhu
Nguva zhinji ini ndinoisa zvinyorwa zvakatsaurirwa ku polymer ivhu, inogona kuumbwa uye inogona kushandiswa kune zvisingaverengeke Crafts. Ose maviri kugadzira zvidhori, kugadzira maketani makiyi kana zvishongo. Icho chinhu chandinoda uye zvakare chinonakidza kwazvo kushanda nacho.
Chaingodzokorodza ndiwo mutengo sezvo usiri iwo wakanyanya kudhura, asi unodhura zvakakwana kuti usautenge kana tisina chokwadi chekuti tichaitei nayo kana kana tichizoziva kuti tingaipe sei kushandisa kwakanaka. Nechikonzero ichocho, mune yanhasi posvo ini ndinoisa recipe yekugadzira yakagadzirirwa imba yevhu uye kuitira kuti iwe ugone kuyedza nekutamba nezvinhu nenzira yakachipa kwazvo
La polymer ivhu, inozivikanwawo seFimo, ndeimwe yezvakakosha kwazvo munyika ino yekusika nekufungidzira. Kutenda kwazviri tinokwanisa kugadzira ese maumbirwo anoonekwa mundangariro medu uye nezvinopfuura zvinoshamisira mhedzisiro. Tsvaga zvese zvaunoda nezvake!
1 Chii chinonzi polymer ivhu?
2 Zvishandiso zvekugadzira ivhu repolymer
3 Nzira yekugadzira yakagadzirirwa polymer ivhu
4 Ko ivhu repolymer rinoshandiswa sei?
5 Ndekupi kwekutenga polymer ivhu?
6 Mhando dzinozivikanwa kwazvo dzevhu repolymer
7 Mhizha ine polymer ivhu
Chii chinonzi polymer ivhu?
Sezvo isu takazvipa nenyeredzi chigadzirwa, ikozvino isu tinofanirwa kuziva chaizvo zvatiri kutaura nezvazvo. Polymer ivhu ivhu rakaumbika. Chokwadi isu tese tinorangarira yehuni yekutamba yataishandisa tichiri vadiki. Zvakanaka, zvakafanana neichi. Inogona kushandiswa nevechidiki uye vashoma vadiki, nekuti zviri nyore kwazvo kushanda pamwe uye hazvidi chero mhando dambudziko.
Musiyano chete watinogona kuwana zvine chekuita nepurasitiki ndeyekuti ivhu iri rinogona kusanganisa mavara. Kana iwe ukasanganisa miviri miviri, iwe unowana iyo chaiyo chaiyo marble mhedzisiro uye kana iwe uchiri kurebesa nguva yekusanganisa, ipapo iwe unowana musanganiswa wakafanana.
3 MAZANO OKUGADZIRA DONGO PENDANI
Zvishandiso zvekugadzira ivhu repolymer
1 teflon poto.
1 mukombe chena chikoro glue (tenga pano).
1 mukombe chibage.
2 tablespoons chicherwa mafuta.
1 tablespoon ye lemon.
Powder tempera yemavara akasiyana. (tenga pano)
Tichasanganisa zvese zvinoshandiswa muTeflon poto kuisa kupisa pamusoro pekupisa kwakadzika. Kana tichida kuti mukanyiwa uve neruvara, tichaisa hupfu hwetera rwevara raunoda muzvigadzirwa, zvikasadaro mukanyiwa uchava chena.
Kamwe kana isu tave nezvinenge zviri muTeflon poto, iyo ticha sanganisa kwemaminetsi gumi pamusoro pekupisa kwakaderera kusvikira bundu rasara. Zvadaro, bvisa kubva pamoto uye rega itonhorere. Wobva waikanya kusvikira yanaka uye inokwanisa kugadzirwa. Chekupedzisira, kuti uchengetedze iwe unofanirwa kuichengeta muhari isina mweya.
Mumufananidzo uri pamusoro apa unogona kuona zvidimbu zvakagadzirwa ne polymer ivhu kuti mugone kuzviitira.
Ko ivhu repolymer rinoshandiswa sei?
Zvino zvatave kuziva kuti ivhu rakaumbika, tinofanirwa kupedzisa ruzivo tichitsanangura mashandisirwo anoitwa ivhu iri. Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuigadzira. Kuti uite izvi, iwe uchafunga nezve chimiro uye iyo uchaumba nemaoko ako. Ne kupisa kweizvi, zvichave nyore uye nyore kubata ivhu. Paunenge uchinge uine chimiro chakagadzirwa, unofanirwa kuenda nacho kuchoto. Ehe, iwe uchaisiya iyo muchinyakare hovhoni kwemaminetsi mashoma. Mumudziyo wega wega wevhu, vanozoratidza nguva yaunofanirwa kuisiya asi sekutonga kwakawanda inogara iri maminetsi gumi nemashanu, angangoita. Patinoibvisa muchoto, rega itonhorere uye kubva pano, unogona kuicheka kana kupenda mufananidzo wawakagadzira. Zvakareruka sekudaro !.
Ndekupi kwekutenga polymer ivhu?
Nzvimbo dzekutanga dzatinofanira kuenda kukwanisa kutenga ivhu repolymer, zvitoro zvekumiririra uye zvitoro zvehunyanzvi. Zvinofanira kutaurwa kuti, kunyangwe ichi chiri chigadzirwa chiri kuwedzera kuzivikanwa, hakuzovi neese munzvimbo idzi. Dzimwe nguva zvinogona kutinetsa, asi isu tichagara tine internet. Kune akati wandei mapeji, zvakare emhizha uko iwe kwaunogona kuawana. Iwe unongofanirwa kutsvaga izvo zvisina mari zhinji dzekutakura nekuti hatidi kuti mutengo wekupedzisira ukwire kupfuura zvakafanira.
Maitiro ekugadzira ivhu mhete mune chena uye goridhe toni nhanho nhanho
Mhando dzinozivikanwa kwazvo dzevhu repolymer
Sezvatakambotaura pakutanga, chinyorwa ichi chinonziwo Fimo. Kunyangwe ichifanira kurangarirwa kuti Fimo izita reiyo chaiyo mhando yevhu uye harisi iro zita rakajairika. Zvakanaka, kutanga kubva pachigadziko ichi, iwe unoziva kuti pasi pezita iri unogona kuwana ivhu kuSpain. Iwe unenge uine marudzi maviri mukati mayo:
Vadivelu Comedy Fimo Classic: Izvo zvakaoma kuumba, asi zvakare yakasimba.
Fimo Nyoro: Izvozvi yagadzirira kushandiswa. Asi zvirokwazvo, icho chakati wandei uye chinogona kuputswa nyore.
Kune rimwe divi, iwe unowanawo iyo mhando Sculpey naKato. Nekudaro, iwe hauchazove nezvikonzero zvekukwanisa kuenda kubasa navo.
Zvinokurudzirwa kutanga nemadiki uye akareruka manhamba asi zvirokwazvo, iwe uchakurumidza kusunungura fungidziro yako uye uone kuti hunyanzvi hwetsinga hunobuda sei nenyaya yemasekondi. Tichadzika here kuti tishande?
Mhizha ine polymer ivhu
Vanhu vazhinji vanofunga izvozvo ne polymer ivhu Unogona chete kugadzira zviyero, uye kunyangwe zviri izvo zvaunowana zvakanyanya, mhando yevhu iyi inopa akawanda akawanda mikana.
Kana iwe uchida kugadzira zviyero uye urikutanga, zvinogona kuve nyore kwauri kuti utange nazvo zvidhori zviri nyore uye iine mashoma ruzivo. Pa internet iwe unowana akawanda "nhanho nhanho" mukutora mifananidzo umo ivo vanokudzidzisa iwe kuenzanisira chikamu chimwe nechimwe chemufananidzo.
Mimwe yeiyo manhamba ayo anowanzo gadzirwa ari nyore uye ane fashoni, iwo kawaii-echikafu chikafu. Zvakajairika kuwedzera keychain, uiise semhete, chishongo kana kushongedza kwepenzura kana peni.
Uyewo unogona kugadzira maruva uye zvirimwa pKushongedza. Mhedzisiro yacho yakanaka kwazvo. Zvibatsire pachako nevanocheka uye maturusi ayo anotendera iwe kuti ugadzire zvirinani zvipedziso. Imwe tsananguro, iwe unogona zvakare kushandisa pastry cutters, sezvo iyo fondant kana makuki akafanana neaya anoshandiswa nevhu.
Iwe uchaona kuti nekuita zvishoma iwe unogona kunyange kugadzira chaiwo maruva.
Sezvandambotaura, haufanire kungogadzira manhamba chete, iyo kushongedzwa kwechikepes ndiyo imwe nzira yakanaka. Iwe une zviuru zvemazano anokukurudzira iwe kushongedza uye kudzokorora izvo zvirongo zvegirazi zvaunoshandisa mazuva ese. Zvakare, kana iwe ukashandisa polymeric kubheka ivhu, unenge usina kana dambudziko kuisa chidimbu chose muchoto, girazi rinobata zvakakwana. Ive nekuchenjerera, usashandise magaba epurasitiki mune ino kesi rako basa rinopera zvakanyanya zvakanyanya.
Pamusoro pezvese izvi, pane inowedzera kuzivikanwa nzira yekushongedza munyika yevhu yevhu inonzi "millefiori" kana muchiSpanish "zviuru zvemaruva". Inosanganisira kubatanidza zvidimbu zvevhu revhu pamwechete kuti vagadzire chubhu iyo yakatemwa kuita zvidimbu uye inoratidza iwo mufananidzo wawakagadzira, kungave kusanzwisisika kana ine yakatarwa mufananidzo. Pakutanga, maruva akagadzirwa, asi zvakachinja uye ikozvino unogona kuwana zvese.
Ndinovimba unozviwana zvichibatsira uye kusvika nguva inotevera DIY.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mhizha On » Crafts uye zvinhu » Nzira yekugadzira yakagadzirirwa polymer ivhu
Chinyorwa chakanakisa, maita basa nekuchigovana, wanga usingazivi nzira iyoyo yekukwanisa kugadzira ivhu repolymer iwe, zvino yave nguva yekuishandisa.
Pindura kuna Mat
Mhoro, regerera mubvunzo chii chinonzi powder tempera? Ini ndinogara kuMexico uye handina chokwadi kana ndakunzwisisa zvakanaka, kana uchiti tempera unoreva pendi yeupfu uye kana zvirizvo, ingave yemuriwo kana sei?
Mhoroi, ini ndaida kuziva kana uchigona kutsiva iyo yemamineral mafuta neyakajairika mafuta kana imwe mafuta?
Mhoroi, mibvunzo miviri
1. Chii chiri kupisa kweupfu? Zvingave anilines here? Iyo yandinoshandisa yevhu inotonhora porcelain uye ingango fanika zvakafanana zvigadzirwa
2. Ovheni inosungirwa here uye / kana iyo microwave inoshanda?
Pindura kuna Julie
Bianca scheiber akadaro
Usataure kuti iri ivhu repolymer, urikugadzira poda yekugadzira, pasita inotonhorera kana porcelain yechiFrench, usaite kuti vanhu vawire mukukanganisa, ivhu repolymer hazvigoneke kugadzira mukicheni nekuti zvinotora makemikari maitiro akaoma mukujekesa
Pindura Bianca Scheiber
Ndokumbirawo mugadzirise zvawatumira, iri harisi ivhu repolymer, urwu rudzi rwevhu rakagadzirwa pamba Polymer ivhu inoda yakaoma makemikari maitiro, sekureva kwezita rayo, ipolymer kana pvc plastiki inoda iro rakazara uye rakashongedzerwa rabhoritari kuti riite. Usavhiringidze vanhu, ini ndiri polymer wevhu modhi uye ichi hachisi chinhu kunze kwechinhu chandinoshanda nacho.
Usavhiringidze vanhu !!!
Zvamunotaura HAZVI ivhu repolymer.
Polymeric ishavha yakavakirwa paPVC, yepurasitiki polymer inoumbwa nemamorekuru akati wandei (monomers) evinyl chloride. Iyo vinyl chloride polymerization maitiro ine huturu hwakanyanya uye inoitika mumafekitori mune hermetically chisimbiso reactors.
Mhoro, masikati akanaka ,, ovhoni inosungirwa kune rudzi urwu rwehunyanzvi? ,, ndinokutendai zvakanyanya pamberi !!!
Ini ndinobvuma, iri harisi ivhu repolymer, inogadzirwa pamba inotonhora porcelain. Kunyangwe zvaporeswa sei muchoto, rega riome, kana chidimbu chakanyudzwa mumvura, chinopedzisira chanyungudika, izvo zvisingaitike pamwe nevhu rechokwadi repolymer, iro rinogona kunge riri mumvura pasina dambudziko, nekuti rinoramba rakaita kunge PVC chinhu
Izvo zvakanaka kune mamwe mabasa ehunyanzvi, uye zvinodhura kushanda nevana. Asi haina kusimba munguva
Bellanira Melendez akadaro
Ndinokutendai zvikuru, kushandiswa kwechigadzirwa ichi kwakanditsanangurira zvakawanda. Munyika yangu hatisati tine chigadzirwa ichi, maita basa ndinogara kuPanama, chokwadi ndechekuti handizive kana vachitengesa, ndakashanda necorcelain inotonhora. Ndatenda
Pindura Bellanira Meléndez
Chinyorwa ichi chakakura, tinosuwa ivhu repolymer nePVA, polyvinyl alchohol inova iyo yekuomesa mweya ivhu revhu, uye tinokurudzira ivhu reKorea nekuti ndere mhando yakanaka kwazvo.
Ini ndinofunga wanga uine zano rakanaka pawakaudza nzira yekugadzira ivhu rakafanana kumba uye kemikari haina ngozi uye ine ma polymers iglue.
Mhoro! Ndakaverenga tsamba yako zvakanyatsonaka, hauna kuiburitsa pachena kuti yakabikwa kusvika papi. Kutenda Kwaziso kubva kuArgentina
Maitiro ekugadzira mwenje wekubata nekudzokorora zvakare kani yetuna.
DIY maitiro ekugadzira chitubu notibhuku kubva kune jira.